Wasiirka Arrimaha dibadda oo maanta hortagay Aqalka sare kana jawaabay su’aalo la weydiiyay+Sawirro – Radio Muqdisho
Wasiirka wasaaradda Arrimaha dibadda ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Yuusuf Garaad Cumar ayaa maanta hortagay aqalka sare ee dalka isagoo warbixin faahfaahsan ka siiyayay mudanayaasha howsha horumarka leh ee wasaaraddu ku tallaabsatay muddooyinki u dambeeyay.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa mudaneyaasha Aqalka sare warbixin guud ka siiyey wax-qabadka wasaaradda ee dhinacyaa horumarka iyo dedaallada ay hadda waddo wasaaraddu isagoo si dheellitiran uga warbixiyey, kaddib mudaneyaasha golaha Aqalka sare waxa ay u gudbeen su’aallo weydiin toos aheyd oo ku socotay wasiirka Arrimaha Dibedda, waxaana kulanka guddoominayey guddoomiye ku xigeenka Koowaad Abshir Bukhaari.
Mudaneyaasha Aqalka sare ayaa su’aalaha ay weydiiyeen wasiirka Arrimaha DIbedda xoogga ku saaray arrimaha Maxaabiista weli dalka dibeddiisa ku xiran, Safaaradaha dalalka Caalamka noogu yaalla iyo sida ay u shaqeeyaan, xiriirka Caalamiga ah, Baasaboorka Diblomaasiga iyo Arrimo kale.
Wasiirka Arrimaha Dibedda Soomaaliya Yuusuf Garaad ayaa uga mahadceliyey mudaneyaasha Aqalka sare Su’aallaha ay weydiiyeen, waxa uuna si waafi ah uga jawaabay dhammaan su’aalihi la weydiiyey.
Guddoomiye ku xigeenka Koowaad ee Golaha aqalka sare ahna ku simaha guddoomiyaha Abshir Maxamed Axmed (Bukhaari) ayaa sheegay in kulan kale la isugi imaan doono si loo dhammeystiro su’aallo weydiinta wasiirka Arrimaha Dibedda Soomaaliya.